ब्रिटिश गोर्खा र सिंगापुर पुलिसमा भर्ती खुल्यो, के चाहिन्छ योग्यता? – Hotpati Media
ब्रिटिश गोर्खा र सिंगापुर पुलिसमा भर्ती खुल्यो, के चाहिन्छ योग्यता?
१५ बैशाख २०७६, आईतवार १२:५९ मा प्रकाशित (2 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट
काठमाडौँ : गोर्खा भर्ती विषयमा विभिन्न बहस भइरहँदा सन् २०२० इन्टेकमा नेपालीका लागि ब्रिटिश गोर्खा र सिंगापुर पुलिसमा भर्ना खुलेको छ। वेलायती सेनाद्वारा जारी सूचनाअनुसार यो पटक धरान र पोखराबाट भर्ती लिइनेछ।
ब्रिटिश गोर्खा एवं सिंगापुर पुलिसको प्रशिक्षण दिन भनेर खोलिएका संस्थाहरुसँग वेलायती सेनाको कुनै सम्बन्ध नरहेको सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ। ‘प्रशिक्षण केन्द्रहरुको ब्रिटिश गोर्खा र सिंगापुर पुलिस फोर्ससँग कुनै सम्बन्ध छैन’, सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रशिक्षण केन्द्रहरुमा भर्ना हुन महँगो परेको हुन सक्छ र गोर्खा भर्तीमा सफलताको कुनै ग्यारेन्टी छैन।’
यो वर्ष ब्रिटिश गोर्खाका लागि कम्तिमा ४३२ जना र गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिसका लागि १२० नेपाली युवा माग गरिएको छ। वेलायती सेना भर्ती प्रक्रिया नि:शुल्क, निष्पक्ष र पारदर्शी हुने दाबी गरेको छ।
के चाहिन्छ योग्यता?
वेलायती सेनाले व्रिटिश गोर्खामा भर्ती हुनका लागि तेस्रो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण अथवा कम्पार्ट पास भए पनि हुने जनाएको छ। नयाँ एसइइ ग्रेडिङ प्रणालीमा न्यूनतम ३ सी र २ डी (अग्रेजी र गणितमा सी ग्रेडिङ अनिवार्य) ग्रडिङ भएको हुनुपर्नेछ। उमेर १ जनवरी २०२० सम्म कम्तिमा १८ वर्ष पुगेको र बढीमा २१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने जनाइएको छ।
उचाई कम्तिमा १५८ सेन्टिमिटर हुनुपर्ने एवं बिएमआई १८–१८ हुनुपर्नेछ। छड्के आँखा भएको वा आँखा ठूलो सानो भएको स्वीकार्य नहुने सूचनामा उल्लेख छ। यसैगरी चश्मा/कन्ट्याक लेन्स/लेजर सर्जरी स्वीकार्य हुने छैन।